Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao | Desambra 2021
Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Orinasa Orinasa, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana News Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Orinasa, The Checkout Fahasalamana Community, Company Fiaraha-Monina, Fahasalamana Mpanao Gazety Pets
Ny zava-mahadomelina Belviq mampihena lanja dia nesorina tamin'ny tsenan'i Etazonia tao anatin'ireo ahiahy mety hampiakatra ny risika homamiadana
Belviq - fanafody mampihena lanja - dia nesorina teny an-tsenan'i Etazonia noho ny fangatahana fisintahana tsena FDA. Ny data dia nampiseho fitomboan'ny risika homamiadana raha oharina amin'ny placebo.
Nanaiky ny generika Eliquis voalohany i FDA: apixaban
Ireo atahorana ho tapaka lalan-dra tsy ho ela dia hanana safidy hafa mora vidy kokoa amin'i Eliquis, izay mihena ny ra. Ny FDA dia nankatoavin'ny kinova Eliquis (apixaban) kinova 2 tamin'ny Desambra 2019.
Nankatoavin'ny FDA i Erleada, fitsaboana kanseran'ny prostaty vaovao
Erleada no fanafody voalohany nankatoavin'ny FDA ho an'ireo fivontosana tsy mahazaka hormonina, tsy manaparitaka (tsy-metastatika), izay vaovao mahafaly ho an'ireo marary voan'ny homamiadan'ny prostaty.
Nankatoavin'ny FDA i Ervebo, vaksinin'ny Ebola voalohany
Ervebo, vaksinin'ny viriosy Ebola voalohany manerantany dia manamarika dingana lehibe iray ho an'ny fahasalamam-bahoaka hiarovana amin'ny aretina mifindra ity.
Izay rehetra fantatsika momba an'i Favilavir, ny fitsaboana coronavirus mety
Favilavir dia zava-mahadomelina antivirus izay ampiasaina amin'ny fitsaboana gripa any Japon ary ankehitriny dia manaraka fitsapana ara-pitsaboana manohitra COVID-19 any Shina.
Nankatoavin'ny FDA ny jeneraly Gilenya
Tamin'ny 5 desambra 2019 dia nanambara ny fankatoavana ho an'ny fingolimod, endrika iraisan'ny Gilenya, izay fanafody fitsaboana MS.
Kinova generika 9 an'ny Lyrica izao no misy amin'ny vidiny ambany kokoa ho an'ireo marary
Nankatoavin'ny FDA ny kinova Lyrica generic (pregabalin) 9 mba hampihena ny vidiny. Ilay anticonvulsant mahazatra dia mety mitentina $ 350- $ 350 latsaka noho ny marika Lyrica.
Nanaiky ny fanafody am-bava voalohany ny FDA ho an'ny fandehanan-dra be ao amin'ny fibroides utérine
Ny fanafody am-bava dia ho avy tsy ho ela hanamaivanana ny rà mandriaka mavesatra (menorrhagia) avy amin'ny fibroids utérine, noho ny fankatoavan'ny FDA an'i Oriahnn.
Nahatadidy takelaka maharitra ela i metformin
Tamin'ny Mey 2020, namoaka fanamarihana an-tsitrapo ho an'ny takelaka metformin ER 500 mg ny FDA. Tamin'ny 4 Janoary 2021, nitatra ny fampahatsiahivana.
Ianaro momba ny fanafody vaovao 5 ho avy amin'ny taona 2020
Manaiky fanafody vaovao isan-taona ny FDA. Ny sasany tonga eo amin'ny tsena, fa ny sasany kosa tara. Ireo no tena mahaliana indrindra eny an-dalana.
Zava-mahadomelina generic vao hita tamin'ny taona 2019
Fitsaboana efa-polo no tonga generika amin'ny taona 2019. Jereo ny fampitahana an'ireo fanafody vaovao ireo amin'ny namany mitovy marika aminy.
Ny FDA dia misintona ny ranitidine amin'ny endriny rehetra
Mpampiasa ny Zantac ve ianao sa ny generic-ny? Fantaro ny dikan'izany ho anao satria ny fivarotam-panafody dia nijanona tsy nanolotra ny pilina noho ny fahatsiarovana ranitidine.
Nanaiky ny Qelbree i FDA, fanafody ADHD tsy manaitaitra vaovao
Qelbree (viloxazine), ny fanafody voalohany tsy manaitaitra ny ADHD ao anatin'ny 10 taona, dia ho azon'ny marary amin'ny telovolana faharoa 2021.
Nankatoavin'ny FDA ny famindrana Rx-to-OTC ho an'ny menaka lohana loha
Ity menaka kitron-dohan-doha ity, Sklice, dia azo alaina amidy ivelan'ny fivarotana izao.
fomba haingana hampidina ny tosidra
Efa ny gripa Inona no tokony hihinana
inona no mitranga raha mandray ibuprofen be ianao
inona no raisina ho maloiloy sy mandoa mandritra ny fitondrana vohoka
prozac paxil sy zoloft no karazana fanafody antidepressant